Home ASIAN FOOTBALL STORIES Park Ji Sung Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
Cusboonaysiinta ugu dambeysay December 28, 2018
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubada cagta ee ugu caansan ee loo yaqaan Nickname; 'Saddex Sambabo Park'. Dabeecadeena Park Ji Sung Story Story Plus Xogta Wada-noolaanshaha Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska / taariikhda Xiriirka Nolosha iyo qaar badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda aan yarayn ee ku saabsan isaga. Iyadoo aanad haysan, waanu billownaa.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah- Nolosha Hore
Park Ji-Sung wuxuu dhashay bishii February 25, 1981, Goheung, South Korea, Park Sung-jong (aabaha) iyo Jang Myung-ja (hooyo). Wuxuu ku soo koray magaalada Suwoon.
Park Ji-sung ayaa jecel yahay in uu arko cayaartoyda kubadda cagta oo ciyaaraya iyo TV-ga inta uu cunuggu yahay. Tani waxay ahayd sida uu u xiiseynayay ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray dhibaato. Waxa uu ahaa mid gaaban oo yar yar. Tani waxay aragtay sida xadidan. Isagoo ka hadlaaya xallinta dhibaatooyinka jidhkiisa, waalidiinta Park waxay ku khasbanaadeen inay tagaan si ay u helaan wiilkooda kubadda cagta ee ballaaran iyo dheerba. Waxay ka dhigeen inuu cabo cabitaan biyo ah oo isku qasan oo la isku qasan yahay oo la kariyey lakabyo roodhida ah iyo geyiga oo dhan oo la aaminsan yahay in ay ka caawineyso inuu koro weynaado. Nasiib wanaag, way caawisay.
Park Ji-sung ayaa kalsooni isku qabay mar kale, waxaana uu bilaabay inuu kubad ciyaaro mar kale. Wuxuu u ciyaaray dugsigiisii ​​hoose iyo tartamadii tartanka. Ma qaadan waqti dheer ka hor inta uusan u aqoonsan mid ka mid ah xiddigaha da'da yar ee kubadda cagta South Korea. Dugsiga sare kadib, wuxuu ku qornaa Jaamacada Myongji ee South Korea.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah-Nolosha Qoyska
Magaca aabbaha waa Park Sung-jong halka magaciisu yahay Jang Myung-ja. Labada waalidba way wada dhajiyeen si ay u daawadaan wiilkooda si ay u gutaan riyadiisii. Hooyadiis, Myung-ja way ka fiicnayd aabaha. Waxay mar horay u shaqaynaysay warshad bir ah oo koronto ah oo Kuuriya Hadda ka fariistay.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah-Nolosha Xiriirka
Park wuxuu si weyn u ilaalinayay noloshiisa gaarka ah oo uu ka soo muuqday, waxaana uu la yaabay warbaahinta isagoo ku dhawaaqay arooskiisa soo dhaweynta weriyihii hore Telefishinka hore Kim Min Ji isagoo shir jaraa'id qabtay. Waxay guursadeen 27 July 2014 ee Koonfurta Kuuriya. Gabadhoodu waxay ku dhalatay Nofeembar 2015.
Celebrities ayaa daadadku ku dhufteen dhismaha cayaartii kubada cagta ee dhawaan la soo dhaafay Park Ji Sung iyo SBS oo hore u soo wacday Kim Min Ji xafladda arooska ay qabatay July 27. Arooska ayaa ka dhacay Hotelka Sheraton Grande Walkerhill ee Seoul. Munaasabadda waxaa soo qabanqaabiyay SBS Bae Sung Jae, iyo heesaha hambalyada waxaa lagu heesay dhawaaqa Kim Joo Woo.
Sida la filayay, liiska martida waxaa ku jira dhowr xiddigo oo caan ah sida tababaraha kubada cagta ee halyeeyga ah Guus Hiddink, kaas oo ka caawiyey Korea inuu gaaro Top 4 inta lagu guda jiro 2002 World Cup, iyo xiddiga Manchester United Patrice Evra (saaxiibkiisa ugu fiican ee Europe).
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Park Ji Sung iyo Kim Min Ji ay ka soo jeesteen dadka ajnabiga ah ee jecel in 2011, oo ay si cad u cadeeyeen xidhiidhkooda tan iyo 2013.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah-Shaqada Gargaarka
On 5 October Oktoobar 2014, waxaa lagu dhawaaqay in Park uu ahaa inuu qaato doorka safiir caalami ah ee Manchester United. Waxa uu sidoo kale ka qayb galay xafladaha sanadlaha ah ee samafalka ee Asia Dream Cup oo koox la yiraahdo "Park Ji-Sung iyo saaxiibo.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah-Sheekada Sheeko ee saaxiibtinimo ee dhaaftay dhamaan caqabadaha
Daafaca Manchester United Patrice Evra iyo Ji Sung Park ayaa ah saaxiibada ugu fiican. Ma ahan oo kaliya garoonka, laakiin si ka duwan garoonka, sida Evra inta badan jecel yahay inuu booqdo Park. Isdhexgalka iyaga u dhexeeya labadooduba waxay isu keeneen labada wadaag, ugu dhowaa walaalaha. Evra xitaa wuxuu ku magacaabaa aabaha Park, Park Sung Jong, Papa.
Inaad ku nooshahay England, labada ciyaaryahan waxay ku tiirsanayeen midba midka kale, iyagoo isku dayay dhibaatooyinkooda. Park Sung Jong ayaa hadda muujinaya sheekooyinka aan la sheegin ee labada nin.
Marka Manchester United ay heysato ciyaar dibedda ah, gurigeena ayaa noqonaya meel isku dhafan. Sababtoo ah baabuurtu waa qaali gareyneysaa garoonka diyaaradaha, dhowr ciyaartoy ayaa yimaada gurigayaga si ay u qabsadaan raacista garoonka. Pat, Carlito, VDS, iyo Berba waa macaamiisha caadiga ah iyo sidoo kale Ji. Marwalba waan ka walwalsanahay markaan ku wado iyaga sababtoo ah waxaan la socdaa koox ka mid ah fanaaniinta iyo kharashkooda wadajirka ah waxaa ka sarreeya 40 million !! Sidaa darteed, waa inaan mar walba noqdaa feejignaan iyo sida ugu wanaagsan oo aan isku dayayo inaan ka fekerin burburka! Laakiin Evra marwalba waa uu i xejin karaa jilitaankiisa rasmiga ah, taasina waxay ka takhalustaa wixii walwal ah. Markii aan ku guuleysanay EPL, Evra wuxuu ahaa midkii ugu horeeyay ee yimaada, oo i xejiyo aniga iyo xaaskeyga oo sawir nala qaado. Sidoo kale, wuxuu mar walba iigu yeeraa papa. Taasi waa sida ugu dhow ee aan nahay, sida qoys.
Evra waa xiddiga reer France, laakiin dhab ahaantii wuxuu ka yimid Senegal. Wuxuu ku koray waddooyinka danbe ee Les Ulis, meel ay ku yaalliin gangsters. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay aheyd kubad ka hor istaagtay Evra inuu ka tago wadadaas. Waxaan u maleynayaa in Henry Henry uu ka yimid gobolkaas.
Evra iyo Park waa isku da '. Evra waa xoogaa ka sarreeya marka loo eego Ji, lakiin labadooduba ma hadlaan wax badanna labadoodaba waa kuwo indho-indheyn ah. Ruud Van Nistelrooy oo hore ama Edwin Van der Sar, saaxiibada intooda badan Ji ayaa ka yimid dibada, meel ka baxsan UK. Ciyaartoyda Ingiriisku sida caadiga ah waxay iskula xiraan midba midka kale, sidaas darteed ciyaartoyda ajnabiga ah ayaa badanaa isku dhafan oo is isku xidha.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah-Saaxiibtinimada ...
Gawaarida sii socota ... In xagaaga 2007, intii uu socday tartanka Asia, Evra wuxuu awooday inuu booqdo Korea. Maalintii kahor ciyaarta, wuxuu u yimid gurigeena Suwon. Manchester, marwalba wuxuu inoo weydiistay hadii uu booqan karay gurigeena Kuuriya haddii uu fursad u helay. Sidaa darteed, wuxuu qabtay fursada markii Manchester United ay timid Koofurta inuu yimaado oo na soo booqdo. Ma ahan oo keliya inuu eego hareeraheena, laakiin sidoo kale wuxuu i weydiistey in aan u qaadan karo goob lagu caweeyo ee Seoul. Anigana marnaba noloshaydii aan ku noolaa nolosheyda illaa maalintii maalinta aan u dhiibay Evra.
Evra iyo aniga marka hore waxaan la kulmay saaxiibo laakiin cadowgu wuxuu ku soo laabanayaa 2005. Waxay isku dhaceen wareega xiga ee Champions League, waxaan u ciyaaray PSV, Evra wuxuu u ciyaaray AS Monaco. Labada lugood, waxaan ciyaaray dhinaca midig ee qadka dhexe, Evra wuxuu u ciyaaray daafac bidix, sidaasi darted labadeenuba si joogta ah ayay u dagaalameen. Ugu dambeyntiina, PSV ayaa ku guuleysatay labadii kulan ee 16-1 iyo 0-2. Evra mararka qaar waxa ay ka hadlaan ciyaarta. Waxa uu ku qosliyay "Waxaan haystay fooshaydii habeenkii oo dhan adiguna sidaas uma aanan hubin in aan saaxiibbo kula jiro." "Waxaan kugula yaabay adiga." Waxaa la yaab leh, labadaba aniga iyo Evra waan xasuustaa ciyaarta si aad u fiican. Waxaan aaminsanahay inay aheyd meeshii aan labadeeno si aan u noqono saaxiibo fiican.
Markii Evra uu ku soo laabtay Janaayo ee 2006, wuxuu ku adkaaday inuu isku hagaajiyo kooxda. Waqtigaas, Mikael Silvestre iyo Gabriel Heinze ayaa ku dhawaaqay booskooda ka hor Evra, mana jirin meel u jirta Evra. Mar kasta oo uu fursad u helay inuu ciyaaro, wuu qaldamay, taas ayaana ku kaceysa booskiisa. Waxa uu ahaa mid weerar ku qaaday inuu mararka qaarkood iloobo waajibaadkiisa difaaca wuxuuna ka tagay asxaabtiisa xorta ah. Nasiib darro, waxa loo magacaabay "Dib u dhigid aan marnaba soo celin" qaybo ka mid ah taageerayaasha Utd. Intii lagu jiray waqtiyadii adagaa, aniga ayaa ixtiraamayay Evra waxaanan siiyay garab si aan ugu tiirsanaado. Waxaan u sheegay Evra waqtiyada adag ee aan dib ugu soo laabtay Holland waxaanan isku dayay inaan siiyo kalsoonida uu u baahan yahay.
Waxaan xitaa xiriir saaxiibtinimo la yeelannay Evra markii aan u soo guuray meel ka baxsan gurigiisa Febraayo 2007. Mar kasta oo Evra xaaskiisa, Patricia (magaca ugu horeeya ee Evra waa Patrice iyo magaciisa koowaad waa Patricia), waxay qaadataa caruurteeda in ay booqato qaraabada Faransiiska, Evra wuxuu yimaadaa gurigeena oo wuxuu ku degaa sida haddii uu yahay gurigiisa. Mararka qaar, wuxuu igu marti-qaadayaa gurigiisa, wakhti ayaan wada qaadannaa. Waxaan u maleynayaa in Evra uu ku soo laabanayo raxmarka aan isaga siiyey. Markii aan qaliin ku sameeyay anqawga bidix, waxaan xusuustaa Evra inuu fariin wacan ku soo qoro. Markii aan qalliin ku sameeyay jilibka midig ee gu'ga 2007, Evra ayaa gool u dhaliyay goolkii uu dhaliyey 7-1 oo uu kudhuftay Roma.
Park Ji Sung Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiqo ah-Sii wadista
Evra aabbihiis wuxuu ku nool yahay Dakar, Senegal. Evra ayaa sheegay in, sababtoo ah aabihiis uu marar badan kufsaday, mar kasta oo uu ku laabto magaaladiisa, waxaa jira Evra halkaan, Evra halkaas iyo Evra Evra meel walba. Evra aabbihiis wuxuu caadi ahaan joogaa Senegal, laakiin wuxuu booqday Manchester maalin. Evra ayaa aad ugu faraxsanaa rajada uu ka ciyaari karo aabihiis hortiisa at Old Trafford. Si kastaba ha ahaatee, Ferguson ayaa go'aansaday inuu Evra keydka geliyo ka dib ciyaarta, Evra ayaa aad u murugooday. Wuxuu ku xanaaqay gudaha laakiin markii uu guriga ku soo laabtay wuu qarxay. Wuxuu qeyliyay oo bilaabay waxyaabo dhulka ku tuuraya. Waxay ahayd mid cad oo uu doonayay inuu aabihiisa aamino. Waxaan eegay Evra waxaan ku fakaray "maxaa dhacay haduu igu dhacay aniga? Inta badan waan qariyaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u sheegi lahaa inuu aad u niyad jabay markii uu seegay fursada uu ugu ciyaari lahaa finalka qaar ka mid ah. Mararka qaar, waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo dareenkeyga sida Evra.
Sannad aamin ah, waxaan u guurey guriga Evra loo isticmaalo in lagu noolaado. Waa saddex sheekood oo leh toddoba qol. Evra ayaa sidoo kale ka dhaqaaqay 3-4 daqiiqado ka fog guriga. Marka aan tago tababarka, aniga iyo Evra caadi ahaan wadaagaan baabuur. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ii noqon doona baabuur iyo maalinta xigta waa Evra. Marka tababarku dhamaado, labadeenaba mararka qaar waxay tagaan makhaayad Kuuriya ah si ay u cunaan.
Evra jaceylka uu u qabo Utd waa mid xoogan. Waxa uu helay dalab faa'iido leh oo ka yimid Inter Milan, laakiin si dhaqso ah ayuu u diiday. Mar kasta oo uu la ciyaaro ciyaar kubbadda cagta kubada cagta ah, marnaba ma arag isaga oo xul ah koox kale oo aan ahayn Utd. Haatan waxaan mar kale ku jirnaa finalka Fin CL. Maalmo yar ka hor, Evra ayaa ii sheegay "Saaxiibo, sannadkii hore ma aanan wada ciyaarin ciyaaraha kale, laakiin waqtigan si wadajir ah u wada shaqee. Xasuuso, haddii midkeenaba midkeeno, waa inaan wada dabaalannaa. "
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta buugayga Park Ji Sung Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
South Korea Football News